5 Kasị Mma Obodo Ochie Centres Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Kasị Mma Obodo Ochie Centres Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 28/08/2021)
Obodo ọmarịcha obodo ochie ndị mara mma na Europe bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ike nke akụkọ ntolite Europe. Quaint obere ụlọ, nnukwu katidral ke ufọt obio, ụlọ ndị echekwara nke ọma, na etiti etiti tinye na anwansi nke obodo Europe. na 5 ọmarịcha obodo ochie ndị mara mma na Europe ka dị kemgbe narị afọ.
Na agba, ije, na akụkọ mgbe ochie na-ebi ma na-eguzo n’obodo niile. Site na Prague gaa Colmar, Obodo ochie Europe dị ezigbo mkpa nleta gị, ma ọ dịkarịa ala otu izu ụka dị ogologo.
1. Ogige Obodo Ochie nke Prague, Czech Republic
Obodo ochie mara mma nke dị na Prague mara mma nke ukwuu. Ebe etiti obodo ahụ buru ibu, na ọmarịcha bistros, cafes, na ahịa nri ụlọ ahịa. The square bụ zuru okè n'ebe ndị mmadụ-na-ekiri, akatabi okop Biya biya Czech, ma sọtụji pịkụl mgbe ọ na-eche ihe ngosi elekere mbara igwe. Isi ihe dị na etiti obodo ochie bụ, n'ezie, ụlọ elu mbara igwe. Ya mere, ya ejula gị anya ma ị hụ ìgwè mmadụ na-eme njem nleta na-ezukọ na square kwa elekere.
Akụkụ pụrụ iche nke ọmarịcha obodo ochie dị na Prague bụ ụlọ ndị mara mma. Badị Baroque ụlọ ụka St.. Nicholas na gothic nke ụka Our Lady na narị afọ nke 14 tupu Tyn, a gaghị agbaghara gị. Ochie obodo center ke Prague bụkwa ebe Ahịa ekeresimesi na-ewere ọnọdụ, na maa mma obodo center-aghọ a pụtara akụkọ ifo.
Obodo ọmarịcha obodo ochie dị na Salzburg mara mma ma pụọ ​​iche. Ngwakọta nke ụlọ Italiantali na nke German, Agedị afọ nke etiti na narị afọ nke 19, mepụta otu n'ime obodo ndị mara mma na Europe. Salzburg, a makwaara dị ka Altstadt bụ a UNESCO ụwa nketa saịtị na a magburu onwe ụbọchị-njem si Vienna, iji ụgbọ okporo ígwè.
Obi nke obodo ochie na Salzburg bụ ụlọ ochie nke onye isi, na Residenz State nke 180 ime ụlọ. Ogige Residenz bụ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ahịa Krismas mara mma nke Zalsburg, na egwu egwu egwu. Ọzọkwa, Jide n'aka na ị ga-awagharị n'etiti obodo ochie, ka Residenz isi iyi, Artlọ nwata nke Mozart, na Katidral Salzburg.
Obodo Salzburg dị n’ebe ugwu nke Alpes, na spiers, na domes na ndabere. Osimiri na-agafe otu n'ime obodo ochie echekwara nke ọma na Europe na-agbakwunye echiche post-card.
Munich na Salzburg Zụọ Ahịa
Vienna na Salzburg Train Ahịa
Graz na Salzburg Na-azụ Ahịa
Linz gaa Salzburg Ahịa Ahịa
3. Bruges Old City Centre, Belgium
Brugge, ma ọ bụ dị ka anyị niile maara na ọ Bruges, bụ ihe ọzọ magburu onwe obodo na a maa mma ochie obodo center. Ozugbo ulo nke Vikings, taa ọ bụ otu n’ime Europe bara nnukwu uru. eji’ warara alleys na cobblestone n'okporo ámá, acha ụlọ, na ọwa mmiri na-eme ka ọ bụrụ ebe ihe nketa UNESCO.
Mgbe ị na-awagharị na obodo ochie dị na Bruges, ị ga-achọpụta obere ụlọ ahịa na-enye lace mara mma. eji’ lace bu onye ama ama n’uwa nile, ya mere na mgbakwunye na iweta ọmarịcha eserese, lace ga-abụ ihe ncheta magburu onwe ị nwere ike iweta site na Bruges.
Enwere ike ịnweta ụgbọ njem site na njem ọha na eze site na Brussels, na ị nwere ike inyocha obodo ụgbọ efere, n'ụkwụ, ma ọ bụ ụgbọ mmiri siri. Markt bụ ebe dị mma ịmalite njem gị site na afọ, ma gaa n'ihu na Belfry nke Bruges dị ịrịba ama, na Churchka nke Nwanyị Nwanyị Anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmasị obodo ochie mara mma site n'elu, mgbe ahụ ụlọ elu Belfry na-enye echiche dị iche.
Obodo ochie mara mma nke Colmar bụ otu n'ime ebe ndị kachasị mma ị gara na Alsace. Obodo ochie bụ otu n'ime ogige obodo ochie echekwara na Europe. Houseslọ ndị ahụ’ facades echebewo ha postkaadị-dị ka amara na ịma mma site ochie oge, na i nwere ike hụrụ n'oge Renaissance ọcha ke flamboyant ije.
Ubi vaịn gbara Colmar gburugburu, na agwa banyere obodo ochie, ị ga-ahụ ọmarịcha ụka Saint-Martin. Ihe ọzọ ị gaghị echefu bụ Little Venice na Colmar, ebe ị ga-ahụ obere ụlọ nri dị obere, àkwà mmiri, na ọwa mmiri inyocha.
Enwere ọtụtụ ebe obibi na obere obodo Colmar, ma ị nwekwara ike ịnụ ụtọ obodo ochie ahụ dị na Colmar, on a day-trip from Strasburg. The wonderful vineyards are the perfect excuse for a French ezumike obodo na ngwụcha izu ụka.
Paris na Colmar Zụọ Ahịa
Zurich na Azụmaahịa Colmar
Stuttgart gaa Azụmaahịa Colmar
Luxembourg na ọnụahịa Colmar
5. Florence Old City Centre, Italy
Duomo nke Florence, ya na elu ya na Katidral, na-achị obodo ochie na Florence na amara, ebube, na ịma mma. Obodo ochie obodo na Florence bụ otu n'ime 5 nke kachasị mma ma maa mma na Europe. Ebe ị ga-amalite na saịtị UNESCO a na-amalite Piazza del Duomo na Piazza Della Signoria.
Ọ bụrụ n'ịchọsi ike ịchọpụta karịa nke Florence, mgbe ahu i kwesiri ịga n'ihu na Uffizi Gallery na Boboli Gardens. Enweghị ụzọ dị mma iji mụta banyere akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke obodo kemgbe ọtụtụ narị afọ karịa site na nka. Florence bụ ihe magburu onwe Italian obodo, ebe i nwere ike jidere a panini, n'aka mpụga Duomo. Ọ bụrụ na i nwere oge, wee gbagoo n'elu Duomo ahụ, maka breathtaking echiche nke otu n’ime ndị kasị mma obodo na Italy.
Obodo ochie nke Florence bụ a ụbọchị-njem si Venice. Otú ọ dị, ị ga-arara dịkarịa ala 2 ụbọchị zuru ezu iji nyochaa saịtị na bara nnukwu uru nke Florence.
Florence na Milan Zụọ Ahịa
Florence na Venice Zụọ Ahịa
Milan na Florence Zụọ Ahịa
Venice ka Milan Zụọ Ahịa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi azụ n'oge oge ochie na Renaissance, mgbe ahụ ndị a 5 ochie obodo emmepe na Europe bụ ezigbo njegasi. ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka Akpara njem gị na ndị a kasị maa mma ochie obodo emmepe ụgbọ okporo.
Chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Maa mma Old City Centres Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / fr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.
citycenter Obodo Fairytaletowns oldcitycenter OldcitycentersEurope Train Travel TravelColmar njegharị TravelPrague TravelSalzburg